OpinionLab Analytics Kubatanidza uye Kuyedza | Martech Zone
Chitatu, Kurume 31, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
OpinionLab chikuva chekutora ruzivo rwevatengi kuburikidza neongororo uye mhinduro kubva pawebhusaiti yako. OpinionLab inodaidza iyo Izwi-Ye-Mutengi (VOC) Dhata. OpinionLab ikozvino iri kuwedzera chimiro chayo kusanganisa zvese zviri zviviri analytics kusangana uye kuyedzwa. Izvi zvinonyanya kubatsira kuenzanisa mhinduro dzevashanyi vako nezviitiko zvesaiti.
Nemubhadharo wekutenga mutengi mutsva kanhanhatu kana katanhatu kekuchengetedza uyo aripo, zvakakosha kuti mabhurandi aongorore zvinopihwa nevatengi vane chekuita haasati ambova makuru ,? akadaro Rand Nickerson, CEO weOpinionLab. Paunenge uri paWebhu analytics ipa ruzivo rwakakosha pane zvinoitwa nevashanyi pamhepo, kutepfenyura data reVOC kunozivisa kuti sei vashandisi vacho vachizvibata sezvavanoita. Nekuwedzera kwezvishandiso zvedu zvakabvumidzwa zvekubatanidza kuisa multivariate uye mapuratifomu ekuyedza eA / B senge Omniture Bvunzo & Target, maBrand anogona ikozvino layer peji-yakatarisana nevatengi nzwisiso pamusoro analytics zvabuda. Kunze kwekuona budiriro kana nzvimbo dzedambudziko zvakanyanya, makambani anokwanisa kuwedzera kudzidza kwakakosha pawebhusaiti yavo yese kana sangano, vachiwedzera zvakanyanya iyo ROI yemuyedzo wese wakaitwa.
Semuenzaniso, kana yako analytics dhata inoratidzira kamwe kamwe spike mune peji bounce mwero, iwe unogona kusanganisa yevatengi-mhinduro mishumo kuti udzidze kuti sei vanhu vari kusiya. Kana, kana iwe ukatambira yambiro inoratidza kuti vazhinji vashanyi vepa peji vari kutaura zvisina kunaka, unogona kudzvanya kamwe kuti utarise yemumwe mushandisi analytics data kana chikamu chekutamba.
The analytics kusangana pari zvino kunoshanda neWebTrends, TeaLeaf, Google Analytics, Omniture, CoreMetrics nevamwe.
Tags: vatengi ongororomaoni labmaonerodhata dataizwi remutengi